Kennwere enwe mebere Dari kiiboodu okirikiri nhọrọ ukwuu online | Lyderi.com
Mebere Dari kiiboodu online
Mebere Dari kiiboodu online kennwere enwe
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka teepu ihe na Dari online, ma na kọmputa ma ọ bụ na laptọọpụ bekee okirikiri nhọrọ ukwuu - gị mkpa a mebere Dari kiiboodu na kọmputa gị na ihuenyo. Ọ dị mfe iji na-adaba adaba. Ọ bụrụ na saịtị ahụ bụ ihe ị na-adịghị amasị ma ọ bụ ihe na-adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ na-abụghị eziokwu - biko, ka anyị mara. Ọ dị ezigbo mkpa maka anyị. On Lyderi.com iji Dari mebere kiiboodu, ị nwere ike nnọọ kennwere enwe na online: • dee na mmasị Dari asụsụ online; • izipu ozi enyi kpọmkwem site na anyị na saịtị; • ochoo na Google na YouTube na 1 kwaa (ga-emeghe na ọhụrụ window) • sụgharịrị iji Google-nsụgharị na otu kwaa (ga-emeghe na ọhụrụ window) • ime ka a biputere na Facebook na tweet na Twitter; • Zọpụta ndetu gị ịnọgide na-ede mgbe e mesịrị (na ị chọrọ ka nbanye); • ibudata na ibipụta gị akwụkwọ.
Dee na a mebere kiiboodu Dari - Ọ bụ kennwere enwe na mfe
Anyị na-anwale ruo ogologo oge na saịtị maka Windows na Dari kiiboodu okirikiri nhọrọ ukwuu n ihi na gị mma. Ma ugbu a, anyị nwere obi ike na gị nkasi obi mgbe dee na anyị Dari kiiboodu online na ihuenyo gị ileba anya. Ebe i nwere ike na-eji online ọkọlọtọ Dari kiiboodu (qwerty), kiiboodu na ibe ya. N oge na-adịghị anyị ga-ịgbakwunye Dari kiiboodu na ọdịdị nke mkpụrụ okwu. Ọ bụ nnọọ mfe teepu akwụkwọ ozi, ịsụgharị ha, na-ebipụta na-azọpụta, na-na-akpọtụrụ enyi na Facebook na Twitter. Na N ezie - ihe bụ Internet na-enweghị Google ochoo na video YouTube? Ndị a niile na-eme na-eme na anyị na website ke kiet ke otu - agbalị ya! Ọzọkwa, ị nwere ike ịzọpụta gị e biri ebi akwụkwọ (mkpa ka ị abanye na-eji Facebook, Twitter ma ọ bụ Google), nke ga-anọgide na-mgbe e mesịrị ha.
Esi na-eji mebere Dari kiiboodu na gị na saịtị?
I nwekwara ike wụnye na gị website anyị njikọ, mkpochi efe, ma ọ bụ dum online mebere Dari kiiboodu - n ihi na nke a dị mkpa ka ị idetuo na mado koodu si ebe a gị website ma ọ bụ blog. Anyị bụ ndị na-emeghe ka aro atụmatụ gị mkpa - nnọọ dee anyị na-akọwa ihe na-efu (nke ọzọ zuru ezu - na mma) - anyị ga-eme ihe i kwesịrị!
ịsụgharị si Dari ka bekee kiiboodu online
Ịsụgharị ederede teepu na Dari kiiboodu online, dị nnọọ pịa «Ịtụgharị» na a ọhụrụ window ga-emeghe kasị ewu ewu na n ụwa nile online nsụgharị na saịtị Google. Na saịtị na ndabara, na bekee Ịsụgharị si Dari , ma ị nwere ike họrọ ihe ọ bụla ọzọ na ya naanị ezi uche.